Umatshini wokubumba oomatshini bokuzenzekelayo, abaXhobisi - China iiNxalenye zeMoto zomvelisi
Inkqubo yokuhamba komngundo
Iphaneli yomnyango yomenzi we-china
Iipaneli zokucoca ezenziwe ngocango lwenziwe ngentando ye-OEM. Ngaphezulu kwama-500 okuzenzekelayo okubumba ukuthunyelwa kumazwe angaphezu kwama-20 ngonyaka, malunga nexabiso lesikhunta somnyango, izinto, ubungakanani, imifanekiso, umzi-mveliso, qhagamshelana nathi ukwazi mo.
Isixhobo oluzenzekelayo ibhodi ngumngundo
I-dashboard yokubumba, ipaneli yezixhobo zemoto ukubumba isixhobo somatshini esizenzekelayo sebhodi yedashboard yesembozo se-OEM
Automobile Grille Plastic Inaliti zomngundo
Wamkelekile kwi-odolo ye-Automobile Grille yeplastiki ye-Injection Mold, i-Car Parts ngaphambili i-Grill Injection Mold.
Ngaphambili nangasemva umva bumper auto
I-Aojie Mould ibibonelela ngombumba wangaphambili we-auto bumper, umngundo we-auto bumper mold kunye ne-auto grill yokubumba kubenzi beemoto ezahlukeneyo. Ngokuphuculwa kwesicelo somthengi kumphezulu womngundo wemoto, isakhiwo sangaphandle somhlaba esingaphandle asikwazi ukufikelela kwimarike.
Izahlulo Auto siwisa Ikubumbe
China Umthengisi zeplastiki ngenaliti sokubumbela kwinxalenye yemoto / iinxalenye zemoto / ukubumba iinxalenye zemoto zeplastiki zokubumba / Izahlulo ezizenzekelayo Umbutho okhokelayo kolu shishino ukubonelela abathengi bethu uluhlu olukumgangatho ophezulu weZinto ezizenzekelayo Zokuphosa uMngundo.
Auto Okunye Izahlulo Ikubumbe
Ingaphakathi leemoto kunye ne-exterior trim mold mold eyenza i-OEM, Inika umgca opheleleyo weplastikhi yokubumba kunye nezinto zokubumba iimoto kunye nelori ngokubhekisele kwiinkqubo zokungeniswa komoya, iinkqubo zolawulo lwamanzi, iinkqubo zepetroli, ingaphandle yeemoto kunye neenkqubo zangaphakathi zokubumba, kubandakanya iipaneli zezixhobo, i-bumper, imoto ucango emnyango